पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जीपीसीआरका विद्यार्थी आन्दोलित - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १९ श्रावण २०७६, आईतवार १८:५३
विराटनगर, १९ साउन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका पुर्नमूल्यांकन नगरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् । जिपी कोइराला कलेज अफ एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टर (जीपीसीआर) गोठ गाउँका विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन । वीएस्सी एजीको चौथो सेमेष्टरका विद्यार्थीको नतिजा गत जेठमा प्रकाशित भएको थियो ।
नतिजामा एउटा विषयमा ८ जना विद्यार्थी सफल हुन सकेनन् । प्रिन्सीपल एण्ड प्राक्टीस अफ हर्टिकल्चर विषयमा चित्तवुझ्दो नतिजा नआएको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पुर्नमूल्यांकन लागि निवेदन दिन खोज्दा रिटोटलिङ हुने तर रिचेकीङ नहुने भन्दै परीक्षा नियन्त्रक सुर्यप्रसाद संग्रौलाले भनेको विद्यार्थी निकीता कार्कीले बताउनुभयो ।
चित्तवुझ्दो नतिजा नआउँदा पुर्नमूल्यांकन गर्न पाउने प्रावधान हुँदा पनि विश्वविद्यालयले नमानेपछि अभिभावक सहित विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन । आफ्नो गुनासो विश्वविद्यालयले नसुनेपछि विश्वविद्यालयमा हुने भौतिक क्षतिको जिम्मेवार आफुहरु नहुने विद्यार्थी नेता अविजाल पौडेलले चेतावनी दिएका छन् ।
गोठगाउँबाट सयौंको संख्यामा विश्वविद्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आउँदा कुनैपनि जिम्मेवार व्यक्ति भेट्न नसकीएको आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि अभिभावक मोहन कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी आएको थाहा पाएपछि उहाँहरु भाग्नुभयो ।’ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०६९ साउन २४ गतेको निर्णय अनुसार विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी दिन पनि नमानेको उहाँले बताउनुभयो ।
हर्टिकल्चर विषयमा हीरालाल गेलाल, सपना खड्का, सन्दिपा तिम्सीना, निकिता कार्की, केशवकुमार बुढामगर, सुमितकुमार साह, प्रियंका मण्डल र सपत रुक्सार अनुत्तीर्ण भएका थिए ।
सडक आश्रित महिलाको उद्धार
दोस्रो लक्ष्मीमार्ग गोल्डकप हुने
डा. अग्रवालको अन्त्येष्टी, विराटनगर शोकमा
विराटनगर, ८ जेठ । मस्तिष्कघातका कारण निधन भएका पूर्वकै लोकप्रिय बाल रोग विशेषज्ञ डा. विमल...
विराटनगर, १५ भदौ । आँखामा हुने समस्या र दृष्टिदोष निराकरणका लागि विराटनगरस्थित विराटनगर आँखा अस्पतालले...